Lungwort. ayelapha kanye nezicelo
Lungwort isitshalo zisetshenziswa Sekuyisikhathi eside kufakwe zokupheka yabo abelaphi bendabuko. Ukwakheka imifino isikhwehlela futhi tannins, Silicon futhi ascorbic acid, rutin, futhi bornezit polyphenol, organic acid kanye noshukela. Lungwort liveza izindawo zokwelapha kanye ngokuqondene okuqukethwe okuxubile therein izakhi ezihlukahlukene trace. Njengengxenye zalesi sitshalo esimangalisayo wathola ngensimbi nethusi, manganese, titanium, vanadium nesiliva, kanye calcium ne potassium. Ngaphezu kwalokho, lungwort, njengoba kuqhathaniswa iningi lamalungu Boraginaceae umndeni, kusala mahhala alkaloids, khona elibangela ukubukeka enqabayo engemihle.
I impahla eluhlaza for ukukhiqizwa potions okwelapha ingxenye aboveground zalesi sihlahla. iqoqo wakhe Kwenziwa ngesikhathi izimbali. Isitolo i-frost-okulungiselelwe utshani endaweni emnyama ezomile akukho ngaphezu konyaka owodwa. Lungwort, izithombe ongawabona ngezansi, uthola elisetshenziswa zokupheka eziningi abelaphi bendabuko.
Lesi simila bubaluleke ngoba umphumela wawo eqeda ukuvuvukala kanye amanxeba emzimbeni. Lungwort liveza izindawo zokwelapha kanye njengendlela hemostatic, ejenti isinqandakuvunda kanye analgesic. Ukwakhiwa eliqukethe umkhiqizo okwelapha herbal Kunconywa expectorant, yokuhlanganisa kanye nomphumela isisu. Ukuthola potions, okuhlanganiswayo ku lungwort Ukwakheka, sithuthukisa izivikelo abacindezela izifo eziningi zomzimba.
Broths yenziwa ngamagxolo okwelapha isetshenziswa phakathi sokuvivinya pathologies amaphaphu yomoya. Liveza okuhle lungwort ngokwanele izakhiwo zokwelapha somoya bronchial kanye nesifo sofuba. Kunconywa futhi pathologies kwesinye urinary futhi isibindi. Ukuqeda lezi zinkinga lungwort utshani ngesimo infusions esetshenziswa njengoba isidambisa-zinhlungu futhi isisu.
Izidakamizwa, okuyinto ingxenye isitshalo okwelapha, Kunconywa ukulawula imisebenzi nezindlala endocrine. Lapho pathologies igazi labo wabonisa njenge-ejenti hematopoietic. Decoction yamakhambi ukusiza ukuqeda uhudo, ukuqunjelwa kanye esiswini izifo.
Emazweni amaningi, abantu abaningi esetshenziswa lungwort. ayelapha yalesi usizo imbiza e ukususa izifo zemigudu yokuphefumula. Kulezi pathologies lungwort kubonisa kahle izakhiwo zalo esigubuzele futhi expectorant. Imiphumela emihle etholakale lapho usebenzisa amakhambi okwelapha ekwelapheni pertussis.
Administration kwezidakamizwa, okuyinto ingxenye lungwort, kunomthelela nokucindezela msebenzi obalulekile Umkhuhlane amagciwane herpes. Imithi herbal uthola isicelo yayo lungwort futhi njengendlela ukuqeda abanale nkinga. izakhi Trace, okuyinto abacebile amakhambi okwelapha nomphumela ozuzisayo phezu igazi unekhemikhali radionuclides. Broths okulungiselelwe kusukela lungwort, encishisiwe igazi ekunqandeni, ngaleyo ndlela kuncishiswe ingozi amahlule.
Ncoma abelaphi ethandwa lungwort ukumnika njengendlela ukushabalalisa izinkinga nge umsebenzi izinso kanye wesinye. Ukuphungula lezi izidakamizwa wendlala adenoma.
Lesi sitshalo isetshenziswa njengenhlangano agent yangaphandle lokuqinisa izinwele. Kulokhu, ekhanda is akhuhlwe singene fresh utshani juice. Lapho Izilonda, futhi Ukunqanyulwa kwe ngoba ubovu izifo lungwort izidakamizwa Kunconywa ukuba isetshenziswe bangaphandle.
Mummy Altay: isicelo. Yemvelo mummy Altai: Izakhiwo
Yini liyisibani usawoti, futhi zisebenza kanjani?
Bay ishiya: izakhiwo zokwelapha, Izimo, isicelo
Massage ngoqalo inamathela Creole: Imishini, emasu lasisekelo ekwetfula, amathuluzi
Zethu kwenhliziyo: Izinga kanye kuka
Indlela ugeza ewindini emphemeni ngaphandle? Amathuluzi nemishini ngesigezo amawindi
Kuyini kusilela ikhalori? Kanjani ukubala bese udala kusilela kilojoule isisindo ukulahleka
Kuyini xylitol futhi sorbitol, okuyinto engcono? Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka xylitol futhi sorbitol
Ibhishi laseRublevsky: isimiso, izenzakalo, amanani, i-White Park
Amaphinifa ekuhambeleni zokugcina: indlela thunga izandla zabo
Republic of Adygea: ifulege, isibonakaliso, ingoma
Izidakamizwa "Antistax": Umhlahlandlela, iseluleko